Fivavahana na fanompoan-tsampy - Fiangonan'Andriamanitra any Suisse eran-tany
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2019-01 > Fanompoam-pivavahana na sampy sampy
Ho an'ny olona sasany, ny fifanakalozan-dresaka momba ny fijery izao tontolo izao dia toa kokoa ny avaram-pianarana sy ny abstract - lavitra ny fiainana andavan'andro. Fa ho an'ireo maniry te hiaina fiainana izay navadika ho an'i Kristy amin'ny Fanahy Masina, zavatra vitsy no manan-danja kokoa ary misy fiantraikany lalindalina amin'ny tena fiainana. Ny fomba fijerintsika izao dia mamaritra ny fomba hijerentsika ireo lohahevitra isan-karazany - Andriamanitra, politika, fahamarinana, fampianarana, fanalan-jaza, fanambadiana, tontolo iainana, kolontsaina, lahy sy vavy, toekarena, inona ny dikan'ny hoe olombelona, ​​ny fiandohan'izao tontolo izao.
Hoy i NT Wright, ao amin’ilay bokiny hoe The New Testament and the People of God: “Ny fomba fijery eran-tany no tena fototry ny fisian’ny olombelona, ​​ny maso ijerena an’izao tontolo izao, ny planina, araka izay hitan’ny olona ao aminao, dia tokony ho velona, ​​ary ambonin’izany rehetra izany. Izy ireo dia mametraka ny fahatsapana ny maha-izy azy sy ny tokantrano izay ahafahan'ny olona manana ny maha izy azy.Ny tsy firaharahana ny fomba fijerin'izao tontolo izao, na ny an'ny tena na ny an'ny kolontsaina hafa ianarantsika, dia ho lasa tsy fahita firy "(pejy 124).
Fiaviana ny fijerintsika tontolo
Raha ny fomba fijerintsika sy ny fifandraisan-tsika mampifandray antsika dia mifototra amin'izao tontolo izao fa tsy mifantoka amin'i Kristy, izany dia mitarika antsika lavitra ny fomba fisainan'i Kristy amin'ny fomba hafa. Noho izany antony izany, dia zava-dehibe ny ahalalantsika sy hikarakarana ny lafiny rehetra amin'ny tontolontsika izay tsy manaraka ny lalàn'i Kristy.
Fanamby ny hampifanarahana bebe kokoa ny fomba fijerintsika an'izao tontolo izao amin'i Kristy, satria tamin'ny fotoana niomanantsika handray an'Andriamanitra ho zava-dehibe, dia matetika isika dia efa nanana fomba fijery mivelatra tanteraka - izay notarihin'ny osmosis (influence) sy ny fisainana niniana noforonina. . Ny famolavolana fomba fijery izao tontolo izao dia mitovy amin'ny fomba ianaran'ny ankizy ny fiteniny. Sady hetsika ara-pomba sy fanahy iniana ataon'ny ankizy sy ny ray aman-dreny izany, no dingana misy tanjona eo amin'ny fiainany manokana. Ny ankabeazan'izany dia mitranga amin'ny soatoavina sy fiheverana sasany izay mahatsapa ho antsika fa izy ireo no fototry ny fanombantombanana (na tsy mahatsiaro tena na tsy mahatsiaro tena) ny zava-mitranga ao anatintsika sy ny manodidina antsika. Ny fihetsika tsy mahatsiaro tena no matetika lasa sakana sarotra indrindra amin’ny fitomboantsika sy ny fijoroantsika ho vavolombelona amin’ny maha-mpanara-dia an’i Jesosy antsika.
Ny fifandraisantsika amin'ny kolontsain'olombelona
Mampitandrina antsika ny Soratra Masina fa ny kolontsain'olombelona rehetra dia tsy mifanaraka amin'ny soatoavina sy ny fomban'ny fanjakan'Andriamanitra. Amin’ny maha-Kristianina antsika dia antsoina isika handà ireo soatoavina sy fomba fiaina toy izany amin’ny maha- ambasadaoron’ny fanjakan’Andriamanitra antsika. Matetika ny soratra masina no mampiasa ny teny hoe Babylona mba hamaritana ireo kolontsaina mankahala an’Andriamanitra ary miantso azy ireo hoe “ny... renin’ny fahavetavetana rehetra ambonin’ny tany” (Apokalypsy 1).7,5 New Geneva Translation) ary mamporisika antsika handà ny soatoavina sy fitondran-tena ratsy rehetra ao amin'ny kolontsaina (tontolo) manodidina antsika. Mariho izay nosoratan’ny apostoly Paoly momba izany: “Aza mampiasa ny fari-pitsipik’izao tontolo izao, fa mianara misaina vaovao, mba hiovanareo, ka hitsaranareo raha sitrapon’Andriamanitra ny zavatra iray, na tsara izany, na sitrak’Andriamanitra, na tsia. tanteraka izany.” (Romana 12,2 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Mitandrema amin’izay mitady hamandrika anareo amin’ny filozofia poakaty sy mamitaka, miaraka amin’ny finoana avy amin’ny olombelona izay mihodinkodina eo amin’ireo fotopoto-pitsipika mifehy an’izao tontolo izao, fa tsy Kristy (Kolosiana). 2,8 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Tena ilaina amin'ny fiantsoana antsika amin'ny maha-mpanara-dia an'i Jesosy ny ilana miaina fiainana manohitra ny kolontsaina - mifanohitra amin'ny toetran'ny mpanota amin'ny manodidina antsika. Voalaza fa niaina tamin'ny kolontsaina jiosy niaraka tamin'ny tongotra iray i Jesosy ary namaka fatratra ny lanjan'ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny tongotra hafa. Nolaviny matetika ny kolontsaina mba tsy ho voasambotry ny foto-kevitra sy ny fomba fanao nanaratsy an'Andriamanitra. Tsy nandà ny olona ao anatin'izany kolotsaina izany anefa i Jesosy. Tia azy ireo kosa izy ary nangoraka azy ireo. Raha nanasongadina ireo lafiny momba ny kolontsaina mifanohitra amin'ny lalan'Andriamanitra, dia nanasongadina ny tsara ihany koa izy - raha ny marina, ny kolontsaina rehetra dia fifangaroan'ny roa.
Nantsoina hanaraka ny ohatr'i Jesoa isika. Ny Tompontsika tafatsangana sy tafakatra dia manantena antsika hanaiky an-tsitrapo ny fitarihan'ny teniny sy ny fanahiny ka amin'ny maha-maso-mahatoky azy ny fanjakany feno fitiavana dia afaka mamirapiratra ny fahazavan'ny voninahiny ao amin'ny tontolo maizina matetika.
Mitandrema amin'ny fanompoan-tsampy
Mba hiaina toy ny ambasadaoro amin'izao tontolo izao miaraka amin'ny kolontsain'izy ireo samihafa dia manahaka an'i Jesoa isika. Isika dia tsy mitsahatra mahita ny fahotana lalina indrindra amin'ny kolontsain'olombelona - izany no olana ao ambadiky ny olana momba ny fahitana ambadik'izao tontolo izao. Io olana io, fanompoan-tsampy izany. Mampalahelo fa ny fanompoan-tsampy dia miparitaka amin'ny kolontsaina tandrefana sy mifototra amin'ny hafa. Mila maso fatratra isika hahita izany zava-misy izany - na eo amin'izao tontolo izao sy amin'ny fijerintsika manokana. Sarotra izany ny mahita satria ny sampy dia tsy mora asiana toerana.
Ny fanompoan-tsampy dia ny fiankohofana amin'ny zavatra hafa ankoatra an'Andriamanitra. Izy io dia momba ny fitiavana, ny fahatokisana ary ny fanompoana zavatra na olona iray hafa noho ny amin'Andriamanitra. Mandritra ny Soratra Masina, mahita an'Andriamanitra sy mpitari-dalana avy amin'Andriamanitra izay manampy ny olona hahafantatra ny fanompoan-tsampy isika ary mamoy izany. Ohatra, ny Didy Folo dia manomboka amin'ny fandrarana ny fanompoan-tsampy. Ny Bokin'ny Mpitsara sy ny Bokin'ny Mpaminany dia mitantara ny olana ara-tsosialy, ara-politika ary ara-toekarena nateraky ny olona mahatoky olona na zavatra hafa ankoatra ilay tena Andriamanitra.
Ny fahotana lehibe ao ambadiky ny fahotana hafa rehetra dia ny fanompoan-tsampy - ny tsy fitiavana sy ny fankatoavana ary ny fanompoana an’Andriamanitra. Araka ny nomarihin’ny apostoly Paoly, dia mandrava ny vokany: “Fa na dia teo aza izay rehetra fantany momba an’Andriamanitra, dia tsy mba nanome voninahitra Azy izay tokony ho azy izy ireo, sady tsy nisaotra Azy. , dia tonga maizina ny andro. Ary nasiany sary teo amin’ny fitoeran’ny voninahitr’Andriamanitra tsy mety lo, ... ka dia navelan’Andriamanitra ho amin’ny filan’ny fony ireny ka nafoiny ho amin’ny fijangajangana, ka dia samy nanimba ny tenany izy.” ( Romana 1,21;23;24 Fandikan-teny Genève Vaovao). Nasehon’i Paoly fa ny tsy fahavononana hanaiky an’Andriamanitra ho Andriamanitra marina dia mitarika ho amin’ny fahalotoam-pitondran-tena sy ny fahalotoan’ny fanahy ary ny fanamaizina ny fo.
Na iza na iza liana amin'ny fanitsiana ny fomba fijeriny izao tontolo izao dia tsara ny mahafantatra tsara ny Romanina 1,16-32, izay ambaran’ny apostoly Paoly mazava tsara fa ny fanompoan-tsampy (ilay olana ao ambadiky ny olana) dia tsy maintsy vahana raha tiantsika ny hamokatra voa tsara tsy tapaka (manapa-kevitra amim-pahendrena sy mitondra fitondran-tena). Tsy nifantoka tamin’io lafiny io i Paoly nandritra ny fanompoany (jereo ny oh 1. Korintiana 10,14izay nampirisihan’i Paoly ny kristiana handositra ny fanompoan-tsampy).
Manofana ireo mpikambana ao aminay
Raha ny fanompoan-tsampy dia miroborobo amin'ny kolontsaina tandrefana dia zava-dehibe ny manampy ny mpikambana ato amintsika hahatakatra ny loza atrehany. Tokony heverina ho taratry ny fahatsiarovan-tena ny taranaka tsy miovaova isika fa ny fiankohofana amin'ny sampy fotsiny dia toy ny fiankohofana amin'ny zavatra ara-batana fotsiny. Tsy ampy izany!
Na izany aza, dia tokony homarihina fa ny fiantsoana antsika ho mpitarika fiangonana dia tsy ny hanondro tsy an-kijanona ny olona ny tena ivavahan'ny fanompoan-tsampy amin'ny fitondran-tenany sy ny fomba fisainany. Anjaranao ny mitady ny tenanao. Fa kosa, antsoina hoe "mpanampy ny hafaliany" isika, mba hanampiana azy ireo hahafantatra ny fihetsika sy ny fitondran-tena izay tandindon'ny fifandraisana sampy. Ilaintsika mampahafantatra azy ireo ny loza ateraky ny fanompoan-tsampy ary hanome azy ireo fitsipiky ny Baiboly mba hamerenany ny famoahana ny hevitra sy ny soatoavina izay mamolavola ny fijerin'izy ireo hahitana raha mifanaraka amin'ny finoana kristiana izay lazainy izy ireo.
Nanome izany karazana fampianarana izany i Paoly tao amin’ny taratasiny ho an’ny fiangonana Kolosia. Nanoratra momba ny fifandraisan’ny fanompoan-tsampy sy ny fitsiriritana izy (Kolosiana 3,5 Fandikan-teny Genève Vaovao). Rehefa te hanana zavatra tena ratsy isika ka irintsika izany, dia naka ny fontsika izany— nanjary sampy tokony halain-tahaka, ka tsy miraharaha izay tokony ho an’Andriamanitra. Amin’izao andro feno fitiavan-karena sy fanjifàna izao, dia mila fanampiana isika rehetra mba hiadiana amin’ny fitsiriritana izay mitarika ho amin’ny fanompoan-tsampy. Ny tontolon'ny dokam-barotra rehetra dia natao mba hampidirana ao anatintsika ny tsy fahafaham-po amin'ny fiainana mandra-pahazoantsika ny vokatra na hanaram-po amin'ny fomba fiainana ambara. Toy ny hoe nisy olona nanapa-kevitra ny hamorona kolontsaina natao hanimba ny zavatra nolazain'i Paoly Timoty:
"Fa ny fitiavam-bavaka no tombony lehibe ho an'izay manaiky ho voky, satria tsy nitondra na inona na inona ho amin'izao tontolo izao isika, ka dia tsy hamoaka na inona na inona. ny hanan-karena dia lavo amin'ny fakam-panahy sy ny fampahoriana ary ny filana maro tsy misy antony sady manimba, izay mahatonga ny olona hilentika ao amin'ny fahaverezana sy ny fahaverezana, satria ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra; ny sasany efa naniry izany ka nivily niala tamin'ny finoana ka nanao ny tenany ho tenany. Marary be" (1. Timoty 6,6- iray).
Ny ampahany amin'ny fiantsoana antsika ho mpitarika fiangonana dia ny fanampiana ny mambra ato amintsika hahatakatra ny fomba mahafinaritra ny kolontsaina ao am-pontsika. Tsy hoe miteraka faniriana matanjaka ihany izany, fa fahatsapan-tena ihany koa ary ny fiheverana fa tsy sarobidy isika raha mandà ny vokatra na ny fomba fiaina navoakany. Ny tena manokana amin'ity asa fampianarana ity dia ny ankamaroan'ny zavatra ataontsika sampy dia zavatra tsara. Aminy, tsara ny manana trano tsara kokoa, na asa tsara kokoa. Saingy rehefa lasa zavatra mamaritra ny mombamomba antsika, ny dikany, ny fiarovana ary / na ny fahamendrehantsika izy ireo, dia avelantsika ho tonga eo amin'ny fiainantsika ny sampy. Zava-dehibe ny manampy ny mambra ato amintsika hahatakatra rehefa nanjary lasa zavatra tsara ny fanompoan-tsampy ny fifandraisan'izy ireo.
Ny fahafantarana ny fanompoan-tsampy ho ilay olana ao ambadik'ilay olana dia manampy ny olona hametraka torolàlana amin'ny fiainany hahafantatra hoe rehefa maka zavatra tsara ary manao azy ho sampy - zavatra mifandray amin'ny resaka fihavanana, fifaliana, avelao ny dikany manokana sy ny filaminana. Ireo zavatra ireo dia Andriamanitra irery no afaka atolotra. Ny zavatra tsara afaka manova ny olona ho "zavatra faratampony" dia ny fifandraisana, ny vola, ny laza, ny ideolojia, ny fitiavan-tanindrazana, ary koa ny toe-panahy maha-izy azy manokana. Ny Baiboly dia misy tantara feno momba ny olona manao an'io.
Manompo sampy amin'ny vanim-potoanan'ny fahalalana
Miaina ao anatin’ny antsoin’ny mpahay tantara hoe Vanim-potoanan’ny Fahalalana isika (miavaka amin’ny vanim-potoana indostrialy taloha). Amin’izao andro izao, ny fanompoan-tsampy dia tsy mikasika ny fanompoam-pivavahana amin’ny zavatra ara-batana, fa amin’ny fivavahana amin’ny hevitra sy ny fahalalana. Ny endriky ny fahalalana izay miezaka mafy indrindra hahazo ny fontsika dia foto-pisainana - modely ara-toekarena, teoria ara-tsaina, filôzôfia politika, sns. Amin'ny maha-mpitarika ny fiangonana antsika, dia mamela ny vahoakan'Andriamanitra ho mora tohina isika raha tsy manampy azy ireo hampivelatra ny fahaiza-mitsara ny tenany rehefa misy ny hevitra tsara na ny filozofia dia lasa sampy ao am-pony sy ao an-tsainy.
Azontsika atao ny manampy azy ireo amin'ny fampiofanana azy ireo hahafantatra ny soatoavina sy ny fiheverany lalina indrindra - ny fahitana azy ireo. Azontsika atao ny mampianatra azy ireo ny fomba hamantarana ny vavaka, ny antony nanehoany fihetsika mahery tamin'ny zavatra na tamin'ny media sosialy. Azontsika atao ny manampy azy ireo hametraka fanontaniana toa izao: Nahoana no tezitra be aho? Maninona aho no mahatsapa mafy azy io? Inona ny lanjan'io ary oviana ary ahoana no nahatongavan'izany ho lanjany? Manome voninahitra an'Andriamanitra ve ny fihetsikiko ary maneho ny fitiavan'i Jesosy sy ny fangorahany ny olona?
Aza adino ihany koa fa ny tenantsika manokana dia mahalala ny "ombivavy masina" ao am-pontsika sy ao an-tsaintsika - ny hevitra, ny toetra sy ny zavatra tsy tiantsika hoferanin Andriamanitra, ny zavatra "fady". Amin'ny maha mpitarika ny fiangonana antsika, dia mangataka amin'Andriamanitra izahay mba hamerina manokana ny fomba fijerintsika manokana ka ny ataontsika sy ny ataontsika dia hamoa amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Ny ankamaroan'ny tsy fahaizantsika amin'ny maha-kristiana dia miorina amin'ny fitaomana matetika tsy voafehy amin'ny fomba fijerintsika manokana. Iray amin'ireo voka-dratsy manimba indrindra ny fihenan'ny fijoroanay ho vavolombelona kristiana ao amin'ny tontolo maratra. Matetika isika no mamaly ireo olana maika amin'ny fomba izay taratry ny fomba fijery momba ny kolontsaina sekta manodidina antsika. Vokatr'izany dia maro amintsika no misalasala hamaha ireo olana ao amin'ny kolontsaintsika, ka mahatonga ireo mpikambana ao amintsika ho marefo. Anjarantsika amin'i Kristy ny hanampy ny olony hahafantatra ny fomba ahafahan'ny fijerin'izao tontolo izao ho loharanom-pamokarana ho an'ny hevitra sy ny fitondran-tena izay manala an'i Kristy. Tokony hanampy ny mambran'ny mpikambana isika mba hanombatombana ny fihetsiky ny fony ao anatin'ny fahazavana amin'ny didin'i Kristy hitia an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Midika izany fa mianatra mianatra izay rehetra manompo sampy izy ireo ary manalavitra azy ireo.
nataon'i Charles Fleming